Daawo:Sanad Kadib Duullaanka Mareykanka Ee Ciraaq iyo Suuriya Dowladda Islaamiga oo is fidisay.
Tuesday August 11, 2015 - 12:01:58 in Wararka by Super Admin
12 bilood ayaa kasoo wareegtay waqtigii ay dowladda Mareykanka iyo isbahaysiga 60-ka dowladood ka kooban ay duullaanka dhanka cirka ah ku iclaamiyeen mujaahidiinta dowlada Islaamiga ah.
Isbahaysiga Mareykanka hoggaaminayo oo ay ku midaysanyihiin inta badan dowladhaa reer galbeedka qaaradaha Yurub iyo Mareykanka iyo dowladaha khaliijka carabta ayaa gobollada ay Ciraaq iyo Suuriya ka maamusho dowladda islaamiga ah waxay ka gaysteen 6,000 oo duqeymo ah.
Duullaanka ballaaran ee IS lagu qaaday wax wayn kama tarin habdhismeedka dowladda walina waxay maamulaysaa kala bar masaaxada suuriya halka ay shiicada ka xurraysay intabadan dhulka musliminiinta sunniga Ciraaq.
Telefeshinka Aljazeera ee afka carabiga ku hadla ayaa diyaariyay warbixin uu diiradda ku saarayo sanad kadib duullaankii isbahaysiga Mareykanka iyo dowlada Islaamiga ah,warbixintu waxay sheegaysaa in mujaahidiintu ay isku fidiyeen dhul hor leh oo Ciraaq iyo Suuriya katirsan inkastoo degmooyin iyo deegaano aan badnayn ay khasaarisay.
Hoos Ka Daawo Warbixinta oo Muuqaal ah